musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Mazano Akanakisisa Ekuita Kuti Kune Rwendo Rwakachengeteka uye Runofara
Nekudaro, kana iwe uchida kufamba zvakachengeteka, iwe unofanirwa kutora matanho ekuzvidzivirira nekuti kune akasiyana marudzi ekutyisidzira aunogona kutarisana nawo. Dzimwe nguva, kutyisidzira uku kunoparadza mweya wekufamba nekugadzira bongozozo rakawanda, uye zvinonzwa kushungurudza.
Naizvozvo, kuve nechokwadi chekuti rwendo rwakachengeteka uye rwunonakidza rwuri musimba rako, uye unogona kuzviita nekutevera matipi ari pazasi.
Gadzira Digital Backup yeData Yakakosha
Dhata ibasa guru kune digital nomads. Saka, ita shuwa kuti iwe unogara uine backup yeruzivo rwepasipoti yako, rwendo rwekufamba, kubhuka kwehotera, uye zvimwe zvinhu zvakakosha. Kugadzira ma backups kunokupa mukana kana chero chinhu chisingatarisirwe chikaitika kumagwaro ako ekutanga. Iwe unogona kugara uchitora gwaro rako kubva kune iyo backup pane mudziyo mutsva.
Pamusoro peizvi, zvine hungwaru kusagovana data rakawandisa nevamwe munzvimbo dzeveruzhinji senge cyber cafes. Pane mikana mikuru yekuti mumwe munhu anogona kuba ruzivo rwako pachako.
Iti Kwete kuCouchsurfing
Unogona kunge usingazivi izvi, asi yemira Kunyanya kunakidzwa, asi kune njodzi dzayo, sekugara nevanhu vausingazive kunogona kukuita kuti uve panjodzi yekuba uye mamwe marudzi ekushungurudza. Naizvozvo, zviri nani kubhadhara imwe mari uye kugara mumahotera maunogona kuwana chengetedzo yekupedzisira pamwe nekuvanzika.
Chenjerera Mapickpockets uye Chenjera Nezve Mhomho
Gara wakangwarira paunenge uchitenderera mumisika yemuno kana chero imwe nzvimbo ine vanhu vakawanda. Iwo mapikicha anogona kuyedza kubata zvinhu zvako zvakakosha kana vakaziva kuti wakanganiswa. Saka, nguva dzose edza kutarisa vatorwa pedyo newe uye chengeta zvakakosha pamberi pechipfuva chako pane kuti uchengetedze homwe yako yekumashure kuti uchengetedze.
Govera Rwendo Rwako Nemumwe Munhu
Iyo inzira yakanaka yekurerutsira vadikani vako kana vari kunetsekana nezvekufamba kwako. Hazvina mhosva kuti uri kufamba kumwe uri woga here kana kuti uri muboka; gara edza kugovera rwendo rwako nemhuri yako kana nemumwe munhu waunovimba naye. Inovimbisa kuti kana chero njodzi ikaitika, pane mumwe munhu anoziva kwaunogara uye anogona kusvika kwauri.
Saka, iwe unogona kugovera ruzivo rwekubhurocha kwako hotera kana chero imwe nzvimbo yauchagara. Zvakare, iwe unogona kuenda nhanho imwe kumberi nekugovana nzvimbo yako yekugara navo.
Nguva dzose Takura First Aid Kit
Zviri nani kuve wakagadzirira chero hutano hwekukurumidzira nekuti kuwana rubatsiro rwekutanga nenguva kunogona kuita kuti zvinhu zvive nyore, izvo zvisingagoneke kana usati wagadzirira. Saka, zvine hungwaru kuchengeta kabhegi kerubatsiro rwekutanga mubhegi rako uye kutakura newe panguva yerwendo. Chokwadika, tarisa nhungamiro huru dzekutakura zvinhu zvakadaro.
Dzivisa Yemahara Wi-Fi
Vafambi vanogona kurasika nyore nyore kune imwe nyika. Zvadaro, vanogona kukurumidza kutsvaga yepedyo yemahara Wi-Fi network kuti vaone nzvimbo yavo pamepu. Nekudaro, chenjera kana zvasvika pakubatanidza kune emahara Wi-Fi network. Kazhinji havana kuchengeteka, uye unofanira kuwana VPN vasati vabatana navo. Batanidza kune ari kure VPN maseva uye ita yako internet traffic yakachengetedzwa zvakachengeteka.
Tarisa Yako Inishuwarenzi Inovhara
Iwe unogona kutarisa kuti ndeupi rudzi rwekuvharwa kwemhosva yako inishuwarenzi inopihwa pamukwende wakarasika kana emergency emergency paunenge uchifamba uchibva kumba. Zvakare, kana iwe usina inishuwarenzi yekufamba, unofanirwa kufunga nezvekutenga imwe izvozvi. Inogona kudzikinura nhamba inoremekedzwa yezvinhu zvinobiwa paunenge uchifamba uye kuvhara mari yekurapa.
Kana uri kuenda kunze kwenyika, zvinokurudzirwa kutevedzera COVID-19 nhungamiro yekuchengetedza kuitira kuti kana chero chinhu chikaitika, unogona kuzivisa zviremera nekukurumidza. Zvakare, pamwe zvingave nani kudzivirira dzimwe nzvimbo uye kunamatira kune dzimwe nzendo dzemunharaunda.
Zivisa Bhangi Rako Nezvekufamba
Itsika yakanaka kuita kuti bhanga rako rizive kuti uri kuenda kunze kwenyika kuitira kuti vaderedze mukana wekuita zvechitsotsi mumaakaundi ako. Uyezve, bhangi rako richaziva kuti kutengeserana kwakapedzwa pakadhi rako mune imwe nyika kwakasiyana kubva kwauri, uye hazvizovharidzi kadhi.
Edza Kuita Sevanhu Vemunharaunda
Ndiyo imwe yedzakachengeteka nzira dzekufamba mune chero nyika nekuti hauzokwevera kutariswa kwauri. Ingoita sevanhu veko uye edza kupindirana navo. Ichazvidzikisira mukana wekuti chero munhu aona kuti hausi wemunharaunda.
Zvakare, ziva nezveguta uye rwendo rwako usati wasimuka muhotera. Kana iwe uchida kutarisa mafambisirwo kwenguva yakareba, funga nezvekupinda muchitoro kana mukofi kuti udaro pane kuramba uri panze.
Ita Tsvakurudzo Yakakodzera Nezve Kwauri Kuenda
Izvo zvakakosha kuti uite tsvakiridzo chaiyo nezve kwekuenda pamwe nechero matipi ekufamba uye kurudziro. Kana uine ruzivo rwakawanda pamusoro pekwauri kuenda, unokwanisa kuzvigadzirira zviri nani. Ichakubatsirawo kumepu nzvimbo dzinogona kuve njodzi kwauri uye dzinofanirwa kudzivirirwa kuti dzive dzakachengeteka. Kunewo akawanda kufamba scams kuti unofanira kuziva kuti ugare wakachengeteka. Semuenzaniso, kana mutorwa akaedza kukupa bracelet, usamboitora.
Kufamba ndekwekuongorora nekunakidzwa nezvinhu zvitsva, asi zvakakoshawo kuve nechokwadi chekuti wakachengeteka uchiri kuzviita. Kana imwe njodzi kana chiitiko chinosuruvarisa chikaitika, saka iwe unofanirwa kuzvigadzirira pamberi. Zvakare, kwese kwaunoenda, gara uchichengetedza nhamba dzekukurumidzira dzenzvimbo iyoyo kuti utore zviito zvinoenderana nenguva.